Blog of Nyein Chan Yar: Happy New Year
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ပါ လို့ အရင်ဆုံး နုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီနှစ် သင်္ကြန်တော့ အပြင်မထွက်ဖြစ်ပဲ အိမ်တွင်းပုန်းပဲ လုပ်နေလိုက်တော့တယ်။ အဲတော့ ဓါတ်ပုံလေးဘာလေးလည်း မတင်နိုင်တော့ဘူး။ ကောင်မလေးတွေ ဘယ်လောက်ကဲနေကြလဲ ဆိုတာ မမြင်လိုက်ရတော့ဘူး။ သင်္ကြန်လည်တဲ့ကားတွေ အိမ်ရှေ့က ဖြတ်သွားတာလောက်ပဲ မြင်ရတာပေါ့လေ။ ဒီနှစ် အများအော်ဆိုတဲ့ သီချင်းကလည်း အံ့သြစရာ၊ \_"အိုးလေးလှုတ်ပါဟေ့\_" တဲ့။ အဲဒါတစ်ကယ့် တရားဝင် ထွက်တဲ့သီချင်း၊ သိလား။ ဘာ hip-hop တွေလည်းမသိဘူး။ သံစဉ်ကလည်း eminem သီချင်းထင်တာပဲ။ စိတ်ပျက်စရာ။
အရင် post မှာ အားပေးစကား ပြောသွားကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုတော့ အထူးအထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ comment area မှာ reply ပြန်လို့မရလို့ မပြန်နိုင်တာကို နားလည်ပေးကြပါအုံး။ အရေးကျဲတာကတော့ reasonက အစုံပဲ။ ဟိုနေ့က စာရေးဆရာမကြီး လူထုဒေါ်အမာ ဆုံးသွားတာတောင် ၀မ်းနည်းကြောင်း post ရေးပြီးမှ connection ပြဿနာကြောင့် မတင်လိုက်ရဘူး။ ခေတ်ကြီးက မကောင်းဘူး… လို့ နှစ်သစ် နုတ်ခွန်းဆက်ရင်း မငြီးချင်ပါဘူး။ ကဲပါ… အကောင်းဆုံးအတွက် နှစ်သစ်မှာ… မြန်မာနိုင်ငံကြီး ငြိမ်းချမ်းပါစေ၊ စစ်အာဏာရှင် ပြိုလဲပါစေ… လို့ဆုတောင်းလိုက်ပါရစေ။
Posted by dathana at Wednesday, April 16, 2008
Anonymous May 09, 2008 12:42 PM
Anonymous May 17, 2008 5:49 AM
Anonymous June 20, 2008 4:34 AM
Blog လေးဘာလေး ပြန်ရေးပါဦး။
Anonymous July 06, 2008 5:22 PM
We Sri Lankans, who have enjoyed th efruits of democracy for over halfacentury, have always respected the Burmese people’s struggle against the brutal military dictatorship. The proof of our support is shown the years long campaign we the have carried out thru various means including our website http://www.asiantribune.com to gain freedom for Aung San Suu Kyi.
We are currently disturbed to note that certain Burmese activists in Washington DC have joined withagroup of Sri Lankan tamil extremists inacampaign to discredit Sri Lanka’s name.
In doing so, the Burmese activists are doing harm to our valuable relationship in the long term.
Firstly, irrespective of our support for your cause, we are hurt to realize that some of your people would support those who seek to harm us.
At the same time, these Burmese activists, by joining with world renowned terrorists (Tamil Tigers) will bring harm and disrepute to your people’s cause as well.
We seek that you restrian your activists from causing harm to the relationship we have had with the Burmese struggle foralong time.
By misleading the inexperienced Burmese activists to participate in their activities, the Tamil Tigers supporters are seeking to gain from the purity of the Burmese struggle. In the process the Burmese can only lose credibility and be viewed with suspicion, once they are known to be linked toashadowy group of terrorism supporters.
Sri Lankan community in the USA
Anonymous August 11, 2008 10:42 PM
Great job with blogging! I would like to invite you to join the Myanmar Wikipedia community. If you have any questions, feel free to ask me.
Anonymous December 30, 2008 7:29 AM
Anonymous February 04, 2009 9:52 AM